Bitcoin कसरी काम गर्दछ? - मेरो मुद्रा बनाउने ब्लग
जुन 7, 2018 जुलाई 23, 2018 व्यवस्थापक0टिप्पणीहरू Bitcoin, Bitcoin 101, नगद सबै आशा बारेमा छ. वा छैन?, खरिद Bitcoins सुरक्षित, काम
तपाईं वरिपरि पढन्तेहरूका सबै हुन Bitcoin गर्न निश्चित हेर्न र तपाईं अझै पनि आफ्नो मन मा एक प्रमुख प्रश्न चिन्ह हो… तपाईं के सोच्नुहुन्छ र विश्वास थियो? खुसीको, OneTime बाहिर Aux सेना डिजिटल मुद्रा सम्बन्धी एक परिचय छ कि. बरु वा, cryptocurrency. Cryptowat? हामी तपाईं को लागि भनेर वर्णन.
नगद सबै आशा बारेमा छ. वा छैन?
Bitcoin रूपमा जारी थियो’ डिजिटल मुद्रा प्रणाली’ मा 2008 एक Satoshi Nakamoto द्वारा. कि शीर्षक अब पौराणिक छ हुनत, व्यक्तिगत (वा दल ) यो शीर्षक समर्थन अज्ञात छ. उद्देश्य मा. यो Bitcoin धारणा कुनै शक्ति एक विश्वसनीय प्रणाली हुन आवश्यक छ कि सुनिश्चित बारेमा छ. बस राख्न: Bitcoin उपयोग गर्न, तपाईं एक विशेष व्यक्ति वा शरीर विश्वास गर्न आवश्यक छैन. कुरा गलत भयो जहाँ कि अवस्थामा द्वारा सर्वश्रेष्ठ देखाएअनुसार: राष्ट्रिय भोजनालय भौचर मा दिवालिया भयो 2009 र एक वर्ष को Cadeaubox पछि युगल पीडित हजारौं दसौं सँगै मुद्रा को एक महान सम्झौता गुमाए चाहन्छु जो त्यागेर.
यो मामलाहरु हरेक निर्णयाधिकार को विश्वसनीयता पुष्टि गर्न अव्यावहारिक छ जस्तो देखिन्छ (कुन हदसम्म यो बैंकहरू लागू गर्न अर्को अध्याय छ, म यो फर्कन छौँ ).
Bitcoins हाल व्यापार!
'तपाईंको कोष खतरा छ’
त्यसैले Bitcoin को शुरुवात विन्दु थियो: तपाईं कसरी अनलाइन उमेर लागि सही पैसा सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, यसको आफ्नै initiators भर गर्न जरूरत बिना”आँखा बंद”?
Zach CopleyThe Byzantine सामान्य विवाद
यो समस्या – तपाईं डिग्री बुझ्न कसरी काम गर्न सक्छन् संलग्न अन्य दल जो विश्वसनीय हुन सक्छ – को Byzantine सामान्य समस्या देखि धेरै दशकसम्म ज्ञात गरिएको छ[ NL ]. यसलाई तल आउँछ Bitcoin गर्न अनुवाद: त्यहाँ एक Bitcoin परिवहन प्रयोग कुनै पनि सन्देश तपाईं कसरी थाह पाउन सक्नुहुन्छ? त्यो उदाहरणका लागि एक बुद्धिमानी ह्याकर covertly थप प्राय हरेक Bitcoin समर्पित एउटा अनुप्रयोग लिखित छैन?
Bitcoin को architect यो लागि समाधान फेला र यो शीर्षक दिए छ: ब्लक दल. अद्वितीय सफ्टवेयर को एक भाग सञ्चालन गर्ने विश्वव्यापी सबै कम्प्युटर सँगै टाइप कि Blockchain. बस बोल्ने, यो Bitcoins सबै ट्रेडों सर्भर ती हजारौं पास छन् भन्ने हो, क्रममा प्रत्येक आकर्षक पीसी ठीक जो ट्रेडों भयो छन् थाह. संक्षिप्तमा: तपाईं केहि आफैलाई बुझ्न भने, त्यसपछि अरू कुनै भर गर्न आवश्यक छैन. कसरी राम्रो यो धारणा पनि Blockchain deciphered छैन भनेर गरिएको तथ्यलाई द्वारा deduced गर्न सकिन्छ काम गर्दछ. तथापि, बिन्दु थप, कसैले छ (अवधारणा मा ) यसलाई पछि तर्क jeopardized. अधिकारीहरूले देखि सबै बिजुली र (केन्द्रीय) बैंकहरू. र एक महत्वपूर्ण कुरा हो. यो कल क्रान्तिकारी .
प्राविधिक, यस विशेष प्रणाली duped छ, को architect पनि सजग हुन सक्छ. तर, तपाईंले मात्र कसरी कम्तिमा राख्न बाहिर आंकडा घटनाको 51 आफ्नो हात मा लिङ्क कम्प्युटर ती हजारौं प्रतिशत. यो कुनै पनि तरिकामा असम्भव छैन, तर अब अति असंभव छ.
Bitcoins संग एक सानो परीक्षण यसलाई चिलाउछ गर्न सुरु भएको छ? अस्थायी रूपमा फिर्ता जग गर्न पहिलो. What's'cash '?
BTC KeychainIs Bitcoin पनि नगद?
आलोचकहरु भन्छन्:” Bitcoin नगद हुन सक्दैन, यसलाई आफ्नो पीसी मा व्यक्तिहरूलाई र zeros को एक पंक्ति केवल छ. त्यस पागल हो जसले वास्तविक यूरो adores! “ती आलोचकहरु सीधा छन्?
Bitcoin सक्रिय विकसित भइरहेको कि एक प्रयोगात्मक नयाँ पैसा छ. पछि देखि अब प्रयोग गरिन्छ यो कम र रूपमा प्रयोगात्मक छैन बन तापनि, तपाईं मनमा पर्छ Bitcoin नयाँ नवीनता. यो underlie कि किराना यो सिस्टम पहिले प्रयास भएको. बाटो प्रयोग समाप्त हुनेछ, कसैले पूर्वानुमान सक्छ. – मूल: bitcoin.org/nl/wat-you-know
यो प्रश्न जवाफ, हामी उद्देश्य र नगद स्तर जाँच्नुपर्छ:
समारोह: नगद को भाग के ?
नगद व्यापार को एक तरिका हो
पैसा खाता एक घटक छ
पैसा एक विकर्षक छ (यो भण्डारण गर्न सम्भव छ)
मापदण्ड: कुरा यदि मुद्रा भेला?
दीगो: पैसा बिगार्छ गर्दैन
Divisible:2आधा लायक जस्तै सम्पूर्ण रूपमा धेरै छन्
मोबाइल : खल्ती मा लगातार एक हेरफेर
अभाव: दोहराने गर्न कठिन
हे भगवान्! यी कुराहरू Bitcoin लागू! त्यसैले हो, प्रयोग गर्न नगद यो इलेक्ट्रोनिक पैसा ठीक छ. तर उद्धरण आधिकारिक Bitcoin.org साइट मा माथि जाँच: यो अझै पनि प्रयोगात्मक छ. यसरी एक्कासी एक हास्यास्पद रूपमा यो ऋणदाता देखि जानुहोस् र यस को लागि Bitcoins खरिद गर्छन्.
Bitcoin प्रयोग सुरु गर्दै
तपाईं बस गुप्त पैसा विषयमा केही आधारभूत समझ प्राप्त गर्नुभएको. अब को लागि स्वाद? सुन्दर, आज लागि पर्याप्त. हामीलाई व्यापार गर्न तल प्राप्त गरौं!
तपाईं चाहनुहुन्छ सुरु गर्न सक्षम हुन2कुरा: पहिलो वालेट केही Bitcoincentjes पछि.
आफ्नो खल्ती लागि आफ्नो पीसी मा आवेदन स्थापना गर्न सक्षम छन्, तर तपाईं पनि आफ्नो ब्राउजर इन्टरनेट वालेट प्रयोग गर्न सक्छ. (आफ्नो कम्प्युटर जस्तै जीमेल रूपमा सेवा प्रयोग वा इन्टरनेटमा मेल कार्यक्रम प्रयोग पत्राचार संग तुलना।) एक विश्वसनीय स्थितिमा संग एक अनलाइन खल्ती Blockchain.info छ. एक जेब बनाउन पछि, तपाईं स्वचालित Bitcoin ठेगाना प्राप्त. खाता नम्बर एक प्रकार. उदाहरण को लागि, यो हामीलाई एक बोली हुन सक्छ:
Bitcoins पाउन (वा Bitcoinents) तपाईं एक बजार कार्यालय भ्रमण गर्न सक्षम छन्. ठूलो स्थितिमा भइरहेको एक डच कार्यालय Bitvavo छ तपाईंलाई सजिलै आदर्श भुक्तानी गर्न सक्षम छन् जो मा. यो Bitcoin रकम त्यसपछि Bitcoin ठेगाना मा सारियो छ.
तपाईं अझै पनि केहि हिचकिचाउने र एक bit'play पैसा चाहनुहुन्छ’ पहिलो? हामीलाई सुखद सन्देश पठाउन(सँगै आफ्नो Bitcoin बोली संग ) र सबै भन्दा राम्रो सन्देश मा हामी एक सानो योगदान सिर्जना.
यो यस OneTime Bitcoin को पहिलो भाग थियो 101. जो म यो Blockchain को संचालन मा गहिरो जानेछौ पालना भागबाट, पैसा रूपमा मूल्य, Alt-सिक्का साथ बैंकहरू बनाम Bitcoin: अन्य cryptocurrencies.
← Paypal लागि Skrill वैकल्पिक?
मुद्रा बनाउन कसरी Snapchat संग आजकल? →